Isitudiyo esinethezekile nesitayela e-Sitges (30km ukusuka e-BCN)
Lesi situdiyo esihle sitholakala endaweni enkulu yase-Sitges ebizwa ngokuthi i-San Sebastian beach, imizuzwana engu-30 kuphela ukuya ogwini lolwandle, futhi siphansi phansi kwebhlokhi yesimanje enezindaba ezi-4. Amaminithi kuphela. hamba uye enkabeni yedolobha nasesiteshini esikhulu nazo zonke izinsiza ezibalulekile, ne-Barcelona uhambo olufushane lwesitimela.
I-Sitges iyidolobha elihle eliqhele ngamakhilomitha angama-30 ukusuka eBarcelone elinamabhishi amaningi amahle, izindawo zokudlela nezitolo.
4.83 ·103 okushiwo abanye
4.83 · 103 okushiwo abanye
Lena indawo enhle ongachitha kuyo iholide lakho, ithule kunenkaba yedolobha imizuzu emi-2 kuphela uhamba kodwa ilungele ukuphumula ukulalela amaza olwandle agelezayo ngemuva. I-San Sebastian inezindawo zokudlela ezinhle namabha abheke ulwandle futhi kuwuhambo olufushane nje ukuya esikhungweni esishisayo esinezindawo eziningi zokudlela, amabha, amakhefi, nezitolo ngaphandle kokukhohlwa ezinye izindawo ezinhle zamabhishi.
Ngihlala ngitholakala kubavakashi bami !
Inombolo yepholisi: HUTB-014799